ट्रेन्डिङबाट गायब नाइलनको साडीमा « Ramailo छ
खेलकुद राजनीति अर्थ स्वास्थ्य यौन
ट्रेन्डिङबाट गायब नाइलनको साडीमा
प्रकाशित मिति : Aug 2, 2017
समय : 10:09 am
युटुव ट्रेन्डिङ नम्वर एकमा पुगेका ‘छक्का पञ्जा २’ को नाइलनको साडीमा गीत र ‘ए मेरो हजुर २’ को ट्रेलर ट्रेन्डिङबाटै हराएका छन् । ट्रेन्डिङ नम्वर एकमा पुगेका दुई फिल्मको गीत र ट्रेलर एकाएक ट्रेन्डिङबाट हराएपछि फिल्म वृत्तमा यसको चर्चा सुरु भएको छ भने निर्माण पक्षपनि रनाभुल्लामा परेको छ । पछिल्लो समय युटुव ट्रेन्डिङलाई पनि चर्चा र प्रतिक्षाको मापक मानिन थालिएको छ ।
कसरी हराए त युटुव ट्रेन्डिङबाट ए मेरो हजुर २ को प्रोमो र छक्का पञ्जा २ को नाइलनको साडीमा गीत ? बुझिए अनुसार युटुव ट्राफिकमा गिरावट आएपछि भिडियोहरु ट्रेन्डिङबाट आउट हुने हुन्छन् । भिडियो ट्रेन्डिङमा आउन भ्युज मात्रै सबैथोक होइन । भिडियोप्रति चासो, सेयर तथा सर्च बढी भएमा कुनै पनि भिडियो ट्रेन्डिङमा आउन सक्छन् । उसो त पछिल्लो समय युटुव ट्रेन्डिङलाई चर्चाको मापक मानिएपनि जस्तो सुकै भिडियोहरु ट्रेन्डिङमा आइरहेका छन् । अर्को कुरा यसअघि पनि केही भिडियोहरु रातारात ट्रेन्डिङबाट गायब भएका छन् ।
मायालु मिरुना मगरलाई ६ तस्बिरमा हेर्नुस्
स्वस्तिमा खड्का कालो पहिरनमा कस्ती देखिइन् ? (६ तस्बिर)
विवाद बिर्सेर’डाँडाको वरपिपल’हेर्न दिपक र पूजाको आग्रह
मिका सिंहको स्वरमा ‘बोतलको बिर्को’ फोड्दै आर्यन, पल र दुर्गेश
‘डाँडाको वरपिपल’प्रिमियरमा दिपा, रेखादेखि स्वस्तिमासम्म
हाम्रो टिम :-
प्रबन्ध निर्देशक/प्रधान सम्पादक : उत्सब रसाईली
अफिसियल फोटोग्राफर : उद्धव रसाईली
बजार प्रबन्धक : कुशल घतानी
ग्राफिक्स डिजाइनर : विजय बस्याल 'टौवा क्रियशन'
एउटा तीतो यथार्थ के छ भने नेपाली समाजमा फिल्मलाई अझ गम्भीर रुपमा लिइदैन । हल्का र टाइमपास जस्तो मात्र ठानिन्छ । प्रगतीतर्फ उन्मुख भए पनि कलाकर्मीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझ साँघुरो छ । र, यो सम्मानभावलाई अझ चुचुरोमा पुराउँदै फिल्म उद्योगप्रति सबैले सम्मान गर्ने माहौल सिर्जना गर्नु दायित्व पत्रकारिताको पनि हो । हामीले यसलाई अनुग्रह भन्दा कर्तव्य ठानेका छौं । त्यस्तै, कलाकार र दर्शकबीचको दुरी कम गर्दै फिल्मप्रति अपनत्व भाव विकास गर्न पनि हामी खुलेर लाग्नेछौं ।
9849631886 [email protected]
सामाजिक सञ्जालमा हामी :-
© Copyright 2017 by RamailoChha